Wafdi ka socda dalka Sucuudiga oo saacadaha soo socdo kusoo wajahan magaalada Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Wafdi ka socda dalka Sucuudiga oo saacadaha soo socdo kusoo wajahan magaalada Muqdisho
Waxaa saacadaha soo socdo la filayaa in magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya uu soo gaaro wafdi uu hoggaaminaayo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Sucuudi Carabiya Caadil Al-Jubeyr.
Wasiir Caadil Al-Jubeyr ayaa markii uu soo gaaro magaalada Muqdisho waxa uu la kulmi doonnaa madaxda sare ee Soomaaliya, isagoona madaxdaasi cadaadis ku saari doonno sidii Soomaaliya ay xiriirka ugu jari lahayd dowladda Qadar.
Sucuudi Carabiya ayaa tan iyo markii ay xiriirka u jartay dowladda Qadar waxay dowladda Soomaaliya cadaadis xoogan ku saartay inay xiriirka u jarto dowladda Qadar.
Dowladda Soomaaliya ayaa iyadane dhinaceeda go’aan ku gaartay in xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex taagan dalalka Khaliijka iyo dowladda Qadar ay dhex-dhexaad ka noqon doonto.
Safarka wasiirka arrimaha dibadda ee Sucuudiga Caadil Al-Jubeyr ee Muqdisho ayaa sidoo kale noqon doonno mid ay Sucuudiga ku doonayso inay dowladda Soomaaliya ku siiso fursadii ugu dambeysay oo ah inay labada dhinac mid la safato.
Dhawaan ayay ahayd markii la-taliyaha boqorka Sucuudi Carabiga uu safar qarsoodi ah ku yimid magaalada Muqdisho, balse dib ugala laabtay natiijo la’aan, kadib markii dowladda Soomaaliya ay ku adkeeysatay inay dhex-dhexaad ka noqonayso xiisadda diblomaasiyadeeed ee ka dhex aloolsan dowladaha Khaliijka iyo Qadar.
Dhinaca kale, wafdi uu hoggaaminaayay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda Qadar Sultan Bin Saad Al-Muraikhi oo maalintii shalay soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa dowladda Soomaaliya ugu mahad celiyay go’aanka dhex dhexaadnimo ay ka qaadatay xiisada diblomaasiyadeed ee ka dhex taagan dowladaha Khaliijka.